Kwaye olujikelezayo credit kuphela ikhadi lamatyala
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Kwaye olujikelezayo credit kuphela ikhadi lamatyala
Esijikelezayo ngetyala, nto leyo indlela yokubhatala a aba zitsalwa isixa esithile semali eyayibekelwe ngexesha lokwenza isicelo kwi-akhawunti elikhethiweyo, ikhutshwe kukuba kwiminyaka yakutshanje olujikelezayo ngetyala kuphela ikhadi lamatyala onceda kulo msebenzi, iye zithandwa. Ukukhokela iintlobo ezahlukeneyo olujikelezayo ikhadi lamatyala-kuphela ukusuka iinkampani sele kuphume.
wanikezela iskim khadi, ukuba bathi ulwandlalo
olujikelezayo ngetyala kuphela ngecredit card, kukho into ekufuneka ekhethiweyo ukongeza sikolo Kakade ukucacisa inani lokuhlawula imali kwindawo ebizwa ngokuba yi-isiseko ethe ngqo.
ethe ngqo kwikhosi yikhosi ekuvumela ukuba ukhankanye isixa lokuhlawula imali 1000 yen esandleni ezingundoqo 5000 yen okanye ngaphezulu, kodwa elinye kukho iikhosi ezipheleleyo, izifundo kunye, balance kwisilayidi intlawulo elizeleyo ngcaciso imfutshane umhla wokufumana imivuzo kukho izinto khosi.
oku ukuba akuzikhathalelanga isixa intlawulo ngokusebenzisa imali, umzekelo, chitha nyanga zonke 10,000 yen ukuba ngaphakathi 100,000 yen, ungakhankanya yen 20,000 Xa kugqithisela. Esijikelezayo ngetyala, kuba oko kukubambisa ngonyaka ngomyinge wenzala we-15% inzala, yi-mali ngokwandisa ixesha yentlawulo inani eyintsalela ekhoyo, intlawulo inzala uye wenza emininzi kuthiwa kuba nokubi, oko ikhondo elivumelana kuyo.
olujikelezayo ngetyala kuphela ngecredit card, ziya kuba zonke zokuhlala olujikelezayo ngetyala ukuba usebenzisa ikhadi. Toka anzima, izihlandlo ezininzi zokuthetha okanye ukuhlawula evenkileni, abantu bacinga ukuba ekhangela akulunganga ukuba nayo. Kwakhona, ukuba ibe seyibuyisiwe kukwahlukana, hayi nje kufuneka ukuba uthathe isigqibo sokuba zingaphi izihlandlo ukuhlawulela yemveliso nganye, apho kukho baninzi, kuye kube nzima ukuqonda ngenxa mali yobomi, it has ukugqithisela naye Habukeru umzamo yolawulo .
ilungelo rhoqo kwiminyaka yakutshanje sibonakalise
, ukhuphiswano lokuzifumanela umxhasi we olujikelezayo ikhadi lamatyala iye ubushushu, zininzi izinto inkonzo yingenelo ezalwa nje inzuzo. Xa ndandineminyaka eli-18 ubudala nangaphezulu, kukho kwakhona apho ubhalisele ikhadi nalo umfundi, nathi ngamandla kumpompoza, ezifana CM kumabonwakude. I-credit olujikelezayo, nyanga zonke Nangona ukuhlawula imali rhoqo imali, kukho kwakhona iqela okunentsingiselo umdla inzala ubalekwe ezinjalo ukuba, impendulo kule, okanye ukuba akhulule nomdla okokuqala kule nkonzo, i ungasihlawula wesistim nexesha ukusebenzisa imali eseleyo kwi-nkqubo kuphela kwi Internet kuye oqeshwe okanye.
kunye ukuphucula ezi nkonzo, kukho izinto ezininzi ezichaza ziye ithande ukuba yande esisicelo. imali yobulungu yonyaka lihlawulwe, inkonzo akufani njengoko ikhadi igolide ebizwa ngokuba namakhadi INkulumbuso zikhutshwa ngabo leyo engalindelekanga. A Ukuncitshiswa eliphezulu kwixesha intlawulo yonyaka, kukho kwakhona ikhadi ohamba ezifana inshorensi ingozi yokuhamba phesheya. Abo ezingasetyenziswanga neekhilomitha okanye, ngenyanga apho umdla olujikelezayo ngetyala kwenzeka kukho inkonzo, ezifana ukunyusa izinga ukuncitshiswa ngongoma.
ukuze usebenzise amacebiso elungileyo
le nkonzo ngexesha lokuyisebenzisa, kukho indlela yokuba elibekwe ukunyusa imali ngenyanga. Esijikelezayo credit-kuphela ikhadi ngendlela imali intlawulo yenyanga imali kukho into enokuthi imiswe ukuya kwizigidi 1 yen maxa amaninzi, kusetyenziswa kakhulu ezayo kwinyanga 1 ngexesha intlawulo ikhadi ngokusebenzisa oku. Nangona ukuba ikhadi inkonzo epheleleyo kobe eliphezulu ukwehla, kwenzeke umdla. amakhadi ngetyala ziye kwiminyaka yakutshanje, kukho kwakhona abo ngokuzenzekelayo kwi-credit olujikelezayo ngexesha ubhalisela. Qaphela ngexesha lesicelo.
ngezantsi, yinto inqaku ishwankathela ukuthandwa ikhadi ezingcwele. (10 Meyi 2015 ngokubhala)
→ AC MasterCard
→ DC ikhadi
→ Cedyna ikhadi Iinkonzo musa ukutshintsha ndawonye amakhadi endle kunye namakhadi INkulumbuso zikhutshwa ngabo leyo engalindelekanga. A Ukuncitshiswa eliphezulu kwixesha intlawulo yonyaka, kukho kwakhona ikhadi ohamba ezifana inshorensi ingozi yokuhamba phesheya. Abo ezingasetyenziswanga neekhilomitha okanye, ngenyanga apho umdla olujikelezayo ngetyala kwenzeka kukho inkonzo, ezifana ukunyusa izinga ukuncitshiswa ngongoma.
→ Cedyna ikhadi Kukwakho abo. Qaphela ngexesha lesicelo.
→ Cedyna ikhadi